Face Shield တပ်မှာလား Mask တပ်မှာလား - Hello Sayarwon
Ye Zon Aung မှ ရေးသားသည်။ 07/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုက တကျော့ပြန်ဆိုးရွားလာနေပြီ။ ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ဖို့ လူတိုင်း Mask တွေ Face Shield တပ်ဆင်ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်လာပြန်ပြီပေါ့။
ကိုဗစ်ရောဂါပိုးဟာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကနေ ထွက်လာတဲ့ Droplet အမှုန်အမွှားလေးတွေကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကိုမဝင်အောင် ကာကွယ်ဖို့က အရေးကြီးလာပြီလေ။
ဒါကြောင့်လည်း မျက်နှာ၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ Face Shield တွေ၊ Mask တွေ တပ်ဆင်ဖို့ လိုအပ်လာတာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာတစ်ခုရှိလာတာက Face Shield နဲ့ Mask နှစ်ခုထဲမှာ ဘယ်အရာက ပိုပြီးစိတ်ချလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ။
အကြောင်းကတော့ Mask တွေဟာ တချို့သောလူတွေအတွက် နေရထိုင်ရခက်စေပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိသူတွေအတွက်လည်း အသက်ရှူရခက်စေနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ နောက်ပြီး မျက်မှန်သမားတွေဆိုရင်လည်း Mask တပ်ထားချိန်မှာ ချွေးကြောင့် မျက်မှန်ကို ရေငွေ့ရိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တာမို့ မကြာခဏအခက်ကြုံရနိုင်တယ်လေ။
ဒီတော့ လူတိုင်းက Mask တပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကို သဘောမကျတတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ Face Shield က ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။
Mask လား…. Face Shield လား….
အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဘေးကာလမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ မျက်နှာအကာအကွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတစ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နှာချေ ချောင်းဆိုးချိန်မှာထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေဟာ မျက်နှာကိုအကာအကွယ်တစ်စုံတစ်ရာတပ်ဆင်ထားချိန်မှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ လွှင့်စင်နိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်ကို လေ့လာခဲ့ကြတာပါ။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ အဲ့ဒီလေ့လာချက်မှာ Face Shield၊ အဝတ်မျက်နှာဖုံး၊ Valve ပါဝင်တဲ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့ N95 Respirator Mask တွေကို လေ့လာခဲ့တာပါ။
အဖြေကတော့ အဝတ်မျက်နှာဖုံးဟာ နှာချေချောင်းဆိုးချိန်မှာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအတွင်းက ထွက်ရှိလာတဲ့ Droplet အမှုန်အမွှားလေးတွေကို လုံးဝကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပဲ မျက်နှာရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်ကိုရော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါ ပြန့်သွားစေတာပါပဲ။ အဝတ်ပါးလေ ပိုဆိုးလေပေါ့။
Face Shield ကတော့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်ဆီ တိုက်ရိုက်ထွက်မသွားအောင် တားဆီးပေးနိုင်ပေမယ့် မိမိရဲ့ အပေါ်ဘက်၊ အောက်ဘက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ပတ်ပတ်လည်ကို ပျံ့နှံ့သွားစေနိုင်တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
Valve ပါဝင်တဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေကတော့ အဆိုပါ Valve ကနေတဆင့် မျက်နှာမူရာ အရှေ့ဘက်နဲ့ အောက်ဘက်တွေကို အမှုန်အမွှားတွေ ထွက်ရှိသွားစေမှာပါ။
လေ့လာချက်အရ N95 Respirator Mask တစ်မျိုးတည်းသာ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ထွက်လာတဲ့ အမှုန်အမွှားတွေကို ပမာဏအနည်းဆုံးအပြင်ကို ပြန့်နှံ့မသွားအောင် ကာကွယ်ထားနိုင်တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
Face Shield မတပ်ရဘူးလား
အမေရိကန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ရောဂါထိမ်းချုပ်ရေးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန (CDC) ကတော့ Face Shield တွေမတပ်ဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။
Infectious Diseases Society of America ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ ရာဗင်နာ ကူလားကလည်း Face Shield တွေဟာ လုံလောက်စွာ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတာကြောင့် Mask တွေကိုသာတပ်ကြဖို့ ထုတ်ဖော်သတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
တကယ်လို့ Face Shield ကိုမှတပ်ဆင်အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်တွေကို Mask တပ်ပြီး ကာကွယ်ဖို့လိုအပ်သလို မျက်စိကိုလည်း ကာကွယ်ပေးဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။ ဒီအတိုင်း Mask တပ်ထားချိန်မှာထက် Face Shield ထားချိန်မှာ မျက်စိကို လက်နဲ့ပွတ်မိနိုင်ခြေပိုများတာကြောင့်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သူတွေအားလုံးကတော့ စိတ်ချရတဲ့ Mask တွေကို တပ်ဆင်အသုံးပြုဖို့၊ လက်ကိုစင်ကြယ်စွာဆေးဖို့နဲ့ Social Distancing ပြုလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းနေကြပြီး တတ်နိုင်သမျှ နေအိမ်ထဲမှာနေထိုင်တာက ရောဂါကာကွယ်ရေးနဲ့ တားဆီးရေးမှာ အထိရောက်ဆုံးအကူအညီဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မတတ်သာလို့ အပြင်ကိုထွက်ရချိန်တွေမှာလည်း စိတ်ချရတဲ့ Mask မျိုးကို အသုံးပြုတပ်ဆင်ပြီး အပြင်သွားကြဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါရဲ့။